DHAGEYSO-Taliye Tuuryare oo soo waayay amaankii xaafadaha dowlado ka degantahay Muqdisho. | Voice Of Somalia
Taliyaha ciidamada nabad sugida Muqdisho Taliye Tuuryare, ayaa ku wareeray soo helista amaankii xaafadaha dowlada Federaalka ay ka degantatahay Muqdisho.
Wuxuu amar ku bixiyay in baaritaan lagu sameeyo dhamaan gaadiidka soo gala kana baxa magaalada Muqdisho si loo xaqiijiyo amaanka magaalada Muqdisho
“Damiin ayaa laga rabaa qofkasta oo afartan sano ka yar markow Muqdisho soo galaayo” Taliye Tuuryare.
“Magaalada nadiifin ayaa ka socoto, baabuur kasta oo magaalada soo gala waa la baarayaa, gaadiidka qudaarta sida waa la baarayaa, gaari dameerada soo gasha magaalada waa la baarayaa, waana in gadiid kastaa la ogaadaa”
Awaamiirtan, ayaa waxaa soo saaray Taliyaha Hay’adda Nabad Suggida Muqdisho Tuuryare. Awaamiirta ayaa ka kooban toddobo qodob.
1. Hoteel walba waa inuu Sameeyaa Labo Kontorool Baaxadda u dhaxaysa Kontoroolka Koowaad iyo kan Labaad oo ah Albaabka laga soo galayo, waa in uu yahay Masaafo dhan 100 Mitir.
2. Waa in Hoteel walba uu sugaa Amniga 200 oo Mitir oo isku Wareeg ah oo ku Hareereysan Hoteelka.
3. Dadka Degaya Hoteelka waa in laga hayaa Koobi Baasaboor Ama Aqoonsi u dhigma.
4. Qof kasta oo soo booqanaya Muwaadin degan Hoteelka waa in laga Qoraa Qofka uu soo booqanayo,Qofkasta oo ka soo Shaahenaya Hoteelka ama u soo sheeko Doonanaya waa in laga diiwaan galiyaa ID CARD uu wato Ama Magaciisa la qoro.
5. Shaqaalaha Hoteelka ka shaqeynaya waa in laga Diiwaan Galiyaa Xarunta NISA ee Degmada uu ku yaal Hoteelkaas,lana mariyaa Baaritaan Amni Shaqaale walba,waxii Caawin ah oo ay u baahdaana waxaa ay la soo Xariiri karaan Hay’addaha Amniga.
6. Hoteel waliba Amniga Muwaadiniinta degan waxaa lagala Xisaabtami doonaa Milkilaha Hoteelka.
7. Hoteel Walba waa inuu leeyhay Qalabka Casrigaa ee Gaadiidka iyo Dadka. Ugu dambeen waxaa lagu Amray Hoteelkii buuxin Waaya Sharuudaha kor ku Xusan in uusan Shaqeyn karin.
Jaamacado Lagu Barto Wadaniyada Itoobiya oo Ka Furan Hargaysa iyo Burco.